Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Victoria House Resort & Spa, Belize na -ewepụta ọ funụ na izu ike ọhụrụ na anyanwụ
Akụkọ kacha ọhụrụ na Belize • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem
Nlele ọdọ mmiri nke Victoria House Resort & Spa, Belize
Ebe a na-eme njem ekwuputala onyinye ọbịa ọhụrụ abụọ-Petite Escape na Blissfully Belize Packages iji kpalie izu ike kachasị ma ọ bụ ịchọ ihe na-atọ ụtọ.
Victoria House bụ ebe dị jụụ ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ezumike zuru oke yana ọtụtụ ihe egwuregwu na -atọ ụtọ.
Ebe obibi okomoko, ihe eji enyere ndụ aka n'ụwa, na ọrụ amara bụ ihe ndị ọbịa ga -ahụ na ezumike zuru oke ha.
Ụlọ Victoria House Resort & Spa, Belize, ihe dị nso na okomoko dị na agwaetiti Ambergris Caye nke Belize, nwere obi ụtọ ibute onyinye ọbịa ọhụrụ abụọ-Petite Escape na Blissfully Belize Packages iji kpalie izu ike kachasị ma ọ bụ ịchọ ihe mkpali. Ndị ọbịa nke ihe oke osimiri nwere ike ịnụ ụtọ njem abalị 3 ruo 7 iji nye ihunanya, izu ike, ihe ọchị, na njem. N'inwe ebe obibi okomoko, ihe eji enyere ndụ aka n'ụwa, yana ọrụ amara, Victoria House Resort & Spa bụ ebe zuru oke iji soro ndị ị hụrụ n'anya na -emekọ ihe ma na -echeta.
Janet Woollam, onye isi njikwa Victoria House Resort & Spa kwuru, "Victoria House bụ ebe dị jụụ ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ezumike yana ọtụtụ ihe egwuregwu na -atọ ụtọ." “Site na ngwugwu mgbapụ Petite ma ọ bụ ngwugwu Belize na -enye ọ ,ụ, ndị ọbịa nwere ọtụtụ nhọrọ ma nwee ike irite uru na nnukwu ụlọ oriri na ọ resortụ resortụ ebe a na -enwekwa ohere inyocha agwaetiti ahụ mara mma ma nweta ọdịbendị pụrụ iche na ọsọ ha na golf ha. ụgbọ ala. ”
The Ngwungwu Mgbapụ Petite na-agụnye:
• Ebe obibi okomoko n'ime ụlọ Casita ma ọ bụ Palmetto
• Nri ụtụtụ zuru oke kwa ụbọchị
• Otu karama Prosecco mgbe ị bịarutere yana mmanya nnabata “Belizean Colada”
• Otu mgbazinye ụgbọ gọlfụ otu ụbọchị (gụnyere gas na mkpuchi)
The Ngwungwu Belize nke ọma na-agụnye:
• Ịhịa aka n'ahụ ịbịanye aka n'akwụkwọ ọgwụgwọ otu awa maka mmadụ abụọ na spa (ọnụ ahịa ya bụ $ 220)
• $ 150 kredit maka iji ụlọ ahịa amaba mmiri dị na saịtị
• karama Prosecco na mmanya nnabata “Belizean Colada”
• Otu mgbazinye ụgbọ gọlfụ gụnyere gas
• iji igwe kwụ otu ebe na-akparaghị ókè, ụgbọ epeepe, mbadamba ihe na-ebili elu na ihe eji egwu mmiri
A ma ama Victoria House Resort & Spa maka ọmarịcha “agwa agwa” ya na ịma mma ụkwụ efu na ebe niile. Ngwongwo ahụ nwere ebe obibi dị iche iche dị ka Casitas nke ebe okpomọkụ, ọmarịcha ụlọ nwere ọdọ mmiri nkeonwe, ụlọ elele anya n'oké osimiri, ma ọ bụ ime ụlọ ndị nwere ọmarịcha mara mma n'ime ụlọ ụdị okpukpu abụọ. Victoria House Resort & Spa na -enwekwa obi ụtọ igosipụta ụlọ a spa ọrụ zuru oke na ebe mgbatị ahụ yana ụlọ nri atọ pụrụ iche maka oge ọ bụla.
N'ịga na nsọtụ otu n'ime ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa kacha dị ịtụnanya, Belize Barrier Reef, Victoria House na -enye ọtụtụ ihe nkiri na -akpali akpali. Ndị ọbịa nwere ike zuru ike na ọdọ mmiri na-enye ume ọhụrụ na ụsọ mmiri nkeonwe, ma ọ bụ sonye na ihe omume dị egwu dị ka ịgba ịnyịnya, kayak ma ọ bụ ịnya ụgbọ mmiri. Ndị otu nwere ahụmihe na ndị agha nọ na Victoria House na Fantasea Dive Shop PADI-gbaara agba dị na ọdụ ụlọ, nwere ike ịhazi ọtụtụ ihe omume maka ndị ọbịa dịka ndakpu mmiri, igwu mmiri, ịkụ azụ, na ọgba. Shoplọ ahịa Fantasea Dive na -enyekwa mgbazinye gia na asambodo.
A na-enweta agwaetiti a n'ụzọ dị mfe site na njem ụgbọ elu nkeji iri na ise nke si Belize obodo, dị naanị kilomita 35 site na ya. Na-enyocha ụlọ arụsị ochie nke Mayan dị nso, na-etinye ihe mkpuchi n'elu ọwa ọhịa jupụtara na Enwe Black Howler, na-ekere òkè na njem oke ohia mmiri ozuzo, ma ọ bụ njem ndakpu mmiri na coral reef reef bụ ihe niile nwere ike ime na Ambergris Caye ma enwere ike ịhazi ya site na otu ndị na-ahụ maka ọgbakọ. Nchịkọta abụọ a dị ugbu a site na Disemba 20, 2021. Nkọwa ndị ọzọ yana otu esi ede akwụkwọ nwere ike ịbụ chọtara ebe a.
Na mgbakwunye, maka ahụike na ọdịmma nke ndị ọbịa ebe a na -eme njem, a zụọla ndị ọrụ niile n'ụzọ zuru oke mkpa ọ dị n'ịkwado usoro ịdị ọcha na usoro nchekwa kachasị elu mgbe ha na -ewepụta ọkachamara na ahụmịhe ọbịa. Ebe a na -eme njem ahụ edobela ụlọ ọrụ nsacha aka n'ime ụlọ ahụ niile, ebunye UVC Handin Disinfectant Units maka ihicha ọnụ ụlọ ndị ọbịa, oghere ọha, yana ebe nri na ihe ọ beụ ,ụ, ma na -ejikwa ngwaahịa nhicha ndị ọzọ egosipụtara dị mma, dị ka Aqueous Ozone maka nsacha mmiri na A/B Nzuzo. Fogging maka kwesịrị sterilization nke nnukwu ebe.
N'ịbụ nke dị na Belize na Ambergris Caye, nke kachasị na agwaetiti Belizean nke dịpụrụ adịpụ, Victoria House dị naanị kilomita abụọ na ndịda San Pedro Town mara mma. Ebe a na-eme ebe a na-atọ ụtọ nke ịdị mma ụkwụ efu nke na-eme ka ndị ọbịa na-alọta maka ihe ndị ọzọ, yana ọnụ ụlọ ọbịa 42 na-adị n'ụdị site na ụlọ elu ụlọ ahụ ruo na ime ụlọ ndị nwere osimiri nwere ọdọ mmiri nkeonwe, ime ụlọ nke ụdị ihe ọkụkụ, na ụlọ nlegharị anya nke oké osimiri. Ụlọ oriri na ọillaụ Palmụ Palmilla na Ogwe Admiral Nelson bụ ndị ama ama maka ezigbo nri na ihe ọ drinkụ drinkụ nke ọrụ pụrụ iche pụrụ iche nyere. Ntị maka nkọwa nke ndị ọrụ na njikwa n'otu aka ahụ enwetala otuto sitere na mgbasa ozi mba ụwa na nturu ugo sitere na ndị otu ama ama dịka Conde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na ebe a.